Budata Fokker D.21 ngwugwu v2.0 FSX & P3D - Rikoooo
Nchịkọta Fokker D.21 v2.0 FSX & P3D
downloads 7 563
Onye edemede: Daan Kaasjager - Dutcheeseblend
Emelitere na 02 / 09 / 2018 : Prepar3D v4 100% dakọtara, ụdị nrụnye 10.5
Emelitere na 2 / 20 / 2015 : Agbakwunyego ndozi ohuru (5, 219, MLM, 221 na 229), akwukwo edeghari, ihe ohuru: agbakwunyere ikike nke TacPack, ihe add-on enwere ike iji ya na-etinyebeghị VRS TackPack, arụmọrụ ụgbọ elu dị mma na FD, ọtụtụ chinchi edobere ma e jiri ya tụnyere nke 1.00, emelitere na ọkwa dị ugbu a.
Iconic Fokker D.21 gụnyere abụọ ụdị, otu n'ime 1938 na ndị ọzọ na 1940. Textures HD na 3D ụdị mere na Blender site Daan Kaasjager. -Agụnye ihe eserese, mmetụta, gauges na omenala ụda.
n'ihi na FSX iji nweta oke kacha nke ederede nwere ike idezi faịlị ahụ FSX.CFG n'usoro TEXTURE_MAX_LOAD = 1024 -eji dochie anya na TEXTURE_MAX_LOAD = 2048.
FSX.CFG dị n'okpuru windo 7: "C: Ndị ọrụ AppData na-agagharị Microsoft FSX"
Echefukwala na-agụ DCB Fokker D.21 Pilot si Notes.pdf
The Fokker D.XXI fighter e mere na 1935 maka site na Royal Netherlands East Indies Army Air Force (Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ml-KNIL). Dị ka ndị dị otú ahụ, e mere dị ka ihe dị ọnụ na obere, ma jupụtara na nkume ugbo elu, nke nwere akwanyere ùgwù arụmọrụ maka ya oge. Abanye arụmọrụ iji na mmalite afọ ndị World War II, enye yeoman ọrụ n'ihi na ma Luchtvaartafdeling (Dutch Army Aviation Group) na Finnish Air Force, na a ole na ole e wuru site El Carmolí factory tupu ya dabara nnupụisi aka n'oge Spanish Civil War.